Fandikana PDF Catalog Motor mandeha ho azy
Catalogan'ny motera miady
Mitadiava katalaogin'ny motera helika amin'ny zana-kazo
Fikajiana maotera sy boaty R series pdf
Ity dia torolàlana momba ny boaty sy ny fifantina maotera ho an'ireo tsy mahalala tsara ny fisafidianana. ny boaty sy motera lehibe dia vy namboarina, alimina daholo ny hafa.
Ho an'ny famolavolana herinaratra sy mekanika amin'ny fihenan'ny tokana & avo roa heny
Ho an'ny fisafidianana tsara ny reducer gear na ny motera mandeha, ny laharam-pahefana avo lenta, ny tahan'ny fitaovana eo am-pivoarana akaiky, ny safidy fametrahana maro, miaraka.
Motera namboarina tamin'ny IEC miaraka amina frein, VFD sns.
Ny mpanjifa dia afaka misafidy karazana lohan-doha rehetra mifanaraka amin'ny motera tsirairay. Torio isan-karazany amin'ny fangaro avy amin'ny motera sy boaty.
Mitadiava katalaogin'ny andian-tsarety helm gearmotor s
S andiam-pandrefesana helm-worm series
Zoro zoro havanana, motera kankana azo apetraka mora foana amin'ny fampiharana henjana indrindra. Herin'ny môtô hatramin'ny 0.04 HP ka hatramin'ny 157.37 HP. miaraka amina helikina / helika-kankana mitambatra, noho izany dia mahomby kokoa izy ireo noho ny fitaovam-piadiana helmika-kankana mahazatra.
Fiara mifangaro miaraka amin'ireo motera ilaina
An'izy ireo ny tanjaky ny kitapo helmika-kankana. Tena mandaitra kokoa noho ny fitaovan'ny kankana tsotra noho ny fitambaran'ny kankana helika. Ny fampitana herinaratra mitanjozotra dia mahatonga ny tariby mitondra helika-kankana indrindra mangina amin'ny torolalana matevina nefa avo.
Eto ny torolàlana momba ny fivoriambe sy ny fiasana
Tsory ny safidin'ny vokatra, misy ny fanamarihana avy amin'i Sogears ary koa ny famaritana amin'ny anarana. torolàlana momba ny fifantina motera sy bokin'ny fikojakojana boaty. katalaogy boaty pdf.
Mitadiava katalaogin'ny motera misy motera helika
Ny motera bevelle bevelle bevelle dia manana fahaiza-mitondra mavesatra
Ity dia karazana motera bevel zoro zoro zana-kazo izay refy mitovy amin'ny manjaitra motera bevelle bevel ao anaty katalaoginy, avy amin'ny motera mandeha amin'ny alàlan'ny motera.
Ny motera helika dia manome antoka ny fahombiazana indrindra indrindra
Ny fonosana matevina sy ny rafitra nohavaozina ho an'ny volo vy dia mampiavaka ny tenany amin'ny alàlan'ny milina amin'ny lafiny rehetra. Helical, hazo mifanila, bevel, kankana helika ary motera miady amin'ny kankana.
Ireo fitaovam-piadiana Helical-bevel dia manome fahombiazana avo lenta mihoatra ny 90%
Ny trano fonenana matevina sy nohavaozina amin'ny faribolana helika dia manavaka ny tenany amin'ny masinina amin'ny lafiny rehetra. Servomotors miaraka amin'ny fitaovana Helical-Bevel Gear.
Mitadiava katalaogin'ny motera mifangaro vodilanitra
Tadiavo mora foana ny maotera-motera-motera anao
Motors misy motera avy amin'ny Nord Drivesystems dia mety amin'ny fampiasana intralogistika ary koa ho an'ireo mpampita fitaovana betsaka sy amin'ny sehatry ny sakafo. Manolotra safidy maro karazana Parallel Shaft Geared Motors izy.
Motera parallera napetraka miaraka amina motera novokarin'ny Power Build
Ny gearmotors parallèle parallole dia misy amin'ny tahiry na amin'ny endrika AC na DC. Shaft nitaingina sy flange nitaingina gearmotors helical. Ny orinasa dia manolotra safidy marobe an'ny Parallel Shaft Geared Motors.
Katalaogin'ny reducers zoro mifanila sy havanana
Sehatra indostrialy manokana. Nitendry. Extruders, mitovy reducers sy ny motera maotera Ny refin'ny motera mifanila Helical dia mitovy amin'ny SEW. PNy gearmotors hazo lava dia azo zahana amin'ny tahiry na amin'ny endrika AC na DC.
Mitadiava katalaogin'ny reducers cycloidal gear
Ny fitsipiky ny familiana an'ny planeta cycloidal pin reducer
Cycloid Drive tsy manam-paharoa famolavolana paikady cycloid manana tombony ambony noho ny reducers hafainganana mampiasa kodiarana nify tsy tapaka. Drive dia mahavita mahatanty enta-mavesatra tampoka hatramin'ny 500% amin'ny laharam-pahefana torsiany.
Iray amin'ireo mpanamboatra reducal cycloidal matihanina indrindra
WB andian-dahatsoratra Micro Cycloidal Pinwheel Reducer Gearbox Gear Motor: manana dingana tokana cyclo drive gear reducer, double phase cycloidal gear reducer. Katalaogy Reducer Gear Cycloidal China
Ny reducers hafainganana amin'ny cycloidal dia manome ny tolotra avo lenta avo indrindra
Manokana amin'ny vidin'ny teti-bola fampitaovana herinaratra miaraka amin'ny fitaovana avo lenta. Ny famolavolana kapila cycloidal dia mamela ireo singa fampihenana hiasa amin'ny lamosina. Safidy lehibe amin'ny boaty robotic robotic zero-backlash, boaty boaty servo avo lenta.
Mitadiava katalaogin'ny mpandidy kankana NMRV
Reducers fitaovana kankana sy motera miady amin'ny kankana
Reducer Gear Worm mitambatra NMRV sy NMRVpower kankana reducers amin'izao fotoana izao dia maneho ny vahaolana mandroso indrindra amin'ny takian'ny tsena amin'ny fahombiazana sy ny fahafaha-mandanjalanja.
Mpampihena kankana NMRV sy NMRVpower
Ny andiany NMRVpower vaovao, azo alaina ho safidy helical / worm integral integral ihany koa, dia natao mba hiantohana modularita avo iray. Reducers fitaovana kankana, atambatra ary miaraka amin'ny singa fampihenana ny dingana mialoha.
Mpampihena kankana Motovario NMRV sy NMRV POWER
TNRV andian-dahatsoratra kankana andiana kankila dia andiam-bokatra vaovao novokarin'ny orinasanay tamin'ny alàlan'ny fanatanterahana ireo vokatra andian-tsarimihetsika WJ. Ny zava-bita omena ao amin'ny katalaogy dia mifanaraka amin'ny fametrahana toerana B3 na mitovy amin'izany.